Hurumende Inoti Yawirirana neMozambique paMagetsi
Kubvumbi 02, 2012
Gurukota rezvemhando dzemhoto, VaElton Mangoma, vanoti Mozambique inogona kuwedzera magetsi airi kutengesera Zimbabwe, kana Zimbabwe ikabhadhara imwe mari yechikwereti kuitira kuti chikwereti chayo chidzike kusvika pamamiriyoni makumi mana emadhora.
VaMangoma, avo vanga vari kuMozambique vachiedza kuita hurukuro dzekuti nyika iyi iwedzere huwandu hwemagetsi ainotengesera Zimbabwe, vanoti vakawirirana negurukota rezvemhando dzemoto kuMozambique kuti Zimbabwe ichabhadhara mamiriyoni makumi mana emadhora mukati memwedzi uno.
VaMangoma vanoti kambani yemagetsi yeZesa ichatevera vane zvikwereti zvayo, senzira yekuunganidza nayo imwe yemari iyi, vanenge vatadza kubhadhara mari idzi, vodzimirwa magetsi.
Vanotiwo vanotarisira kuti hurumende ichamira mirawo kuti iunganidze imwe yacho.
Kambani yemagetsi yekuMozambique, Hydro Cahora Bassa, yakaderedza huwandu hwemagetsi ainotengesera Zimbabwe, mushure mekunge Zesa yatadza kubhadhara chikwereti chayo chemari inoda kusvika mamiriyoni makumi masere emadhora.